Fanadihadihana tranonkala miaraka amin'ny Agence Digital Digital
Manampahaizana manokana momba ny Semalt no manome safidy fampielezana SEO telo ho an'ny mpanjifa - AutoSEO, FullSEO, ary fampielezana Analytics. Alohan'ny fanentanana tsirairay, ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO dia handinika akaiky ny loharanon-kevitra an-tserasera ho an'ny fenitry ny fanarahan-dalàna amin'ny famoronana tranonkala sy ny famakafakana SEO.
Ny fampielezankevitra AutoSEO dia manolotra famakafakana mivaingana amin'ny fivarotana an-tserasera ho an'ny fikatsahana ny fikarohana fikarohana. Fanentanana FullSEO dia misy famakafakana isan-karazany hanampiana orinasa mandrobaka ny fanatrehany an-tserasera ao anatin'ny fotoana fohy. Raha izany, ny Fanentanana an'ny Analytics dia manadihady mialoha ny tranokalan'ny mpanjifa.
Mandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny Analytics, dia mandinika ny tranokalan'ny mpanjifa izahay ary miara-miasa amin'ny orinasanao mba hiantohana ny fahombiazana amin'ny Internet. Mandritra ny fampielezankevitra momba ny Analytics, ny fanadihadianay SEO dia hiara-hiasa amin'ny orinasanao isaky ny dingana. Manolotra tatitra feno amin'ny famerenana mandinika ireo hetsika manan-danja avy amin'ny tranonkalanao ianao, ary koa ny tolo-kevitra hitondra ny tranokalanao any amin'ny toeran'ny Google TOP.
Inona ny fahitana tranokala?
Ny fahitana eo amin'ny tranonkala dia ny fahazoana tranonkala hita any amin'ny milina fikarohana lehibe toa an'i Google. Ny fahitana ny tranokala dia voafaritra amin'ny habetsaky ny loharano lehibe indrindra ao anaty tranokala izay mitondra fanontaniana lehibe; fampisehoana ankehitriny izay mamaritra ny isan'ireo fampisehoana tranonkala ao anaty milina fikarohana; ary angon-drakitra ankapobeny ao anaty tranokala izay voarohirohy amin'ny fampidirana azy ho ao anaty milina fikarohana.
Ny fetran'ny valin'ny fikarohana fikarohana dia voafaritry ny hoe matetika ny mpampiasa no manontany fanontaniana manokana ao amin'ny milina fikarohana. Io no kajy amin'ny isan'ireo fampisehoana ao anatin'ny iray volana. Ny toerana misy ny SERP no andalana ny pejy iray manokana amin'ny tranokala iray raha latsaka ao anatin'io fangatahana io. Ny fahaizan'ny toerana iray dia miankina amin'ny antsoina hoe "density dite", izay mampiseho ny tsipika fisehoana. Io isa io dia atao kajy hamaritana ny kalitaon'ny rohy
Ireo manam-pahaizana SEO an'ny Semalt dia afaka manampy ny tranonkalanao hitombo ny fahazoana ny motera fikarohana. Rehefa manao fanadihadiana feno amin'ny tranokala fenoSESEO dia misafidy ny dikan'ny fanitsiana tokony hatao isika. Ho an'ny fivarotana an-tserasera sasany, ny toerana misy azy dia tena ilaina hanampiana ny fampitomboana ny fahitana ny tranonkalany. Araka izany, milaza ny toerana misy azy ireo izahay ao amin'ny tranokalany. Raha ny an'ny hafa, ny vazaha hafa, ny semantika no tena zava-dehibe. Noho izany, dia manome fomba lalindalina kokoa izahay mba hanatsarana ny fikarohana ataon'izy ireo. Rehefa azo antoka izany, ny manam-pahaizana amin'ny Semalt dia hiantoka ny fomba tsara indrindra hanampy azy ireo hampitombo ny isa teny manan-danja ao amin'ny tranonkalanao mba hahazoana antoka fa mahomby.
Momba ny fanontaniana
Rehefa miara-miasa amin'ny SEO ianao dia misy fiofanana mivaingana telo:
Frequency: Mampiseho izany impiry isam-bolana no mitsidika fehezanteny iray ny mpitsidika iray. Arakaraka ny haavon'ny haavon'ny onjam-pifandraisana no maha-SERP azy ambony indrindra.
Ny fiovam-po dia ny isan-jaton'ny isan'ny mpitsidika izay nanao hetsika lehibe tamin'izy ireo tamin'ny isan'izy ireo.
Ny valim-panontaniana momba ny fifaninanana dia midika ny vidin'ny takiana hiditra ao amin'ny TOP ho an'ny teny fanalahidy.
Ireo teny fanalahidy ary ny fetrany
Mizara vondrona 3 ny fanontanian'ireo mpampiasa:
Fanontaniana avo lenta - ny mahazatra indrindra, izay ampiasain'ny olona maherin'ny 5000 isam-bolana. Rehefa avo lenta ny lazan'ny laza dia mahomby ny fampiroboroboana ny lakilasy, saingy mitaky asa be dia be, satria misy fifaninanana maro.
Ny fangatahana antonony matetika - malaza, fa tsy dia mahazatra noho ireo avo lenta. Fanondroana matetika: mpampiasa 1 000-5000 isam-bolana.
Fanontaniana mitongilana kely - ny kely indrindra mahazatra (hatramin'ny 1000 isam-bolana).
Ny fandalinana sy ny fisafidianana ireo andian-teny manan-danja dia tena manan-danja tokoa amin'ny famoronana fototry ny tranokala seminera. Ny fototry ny semantik dia manondro hoe firy ny mpitsidika pejy iray takiana hiditra ao amin'ny TOP. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fanomanana ny atiny. Ny manam-pahaizana momba ny SEO dia manamboatra algorithm izay voaporofo hanampiana ny tranonkala hanentana. Ny pejy voalohany dia nitaingina ireo fangatahana avo lenta. Ny fizarana lehibe dia natao ho an'ny haavo antonony ary ny famandrihana dia mikendry amin'ny fangatahana ambany latsaka.
Rehefa manara-maso ny fanamafisana ny toerana, ireo manam-pahaizana momba ny Semalt dia mahafantatra ireto dingana manaraka ireto:
Famakafakana soratra SEO;
famakafakana ny fivezivezena eo amin'ny tranokala;
Famakafakana SEO ireo mpifaninana;
fandalinana tranonkala SEO teknolojia;
famakafakana rohy ivelany mankany amin'ilay tranokala;
famakafakana ny rafitry ny tranokala semantik.
Famakafakana soratra SEO
Mandritra ny famakafakana lahatsoratra amin'ny SEO, ny manam-pahaizana dia mamaritra ny maha-zava-dehibe ny lahatsoratra amin'ny pejy miorina amin'ny teny fanalahidy ampiasaina hampiroboroboana ny tranokala amin'ireo milina fikarohana. Ny famakafakana lahatsoratra ho an'ny fangatahana fikarohana dia voafantina tsara alohan'ny hanombohantsika ny fampiroboroboana ny votoatiny. Izahay dia manomboka amin'ny alalàn'ny famakafakana manokana hampitaha ny pejy nanafatra na ny tranokala iray manontolo amin'ny valin'ny fikarohana hafa an'ny TOP. Aorian'izany dia ampitahaintsika ny halavan'ny soratra miaraka amin'ny isan'ny teny eo amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana izay hita maso avo. Izany dia mamela ny matihanina hahafantatra ny halavan'ny andalana tsirairay. Na izany aza, tsy misy fomba ahafahana miantoka valim-pikarohana TOP, amin'ny fanitsiana ny tondro zotra afaka ahafahantsika manatsara ny singa SEO ao amin'ny tranonkala iray.
Amin'ny alalàn'ny famakafakana ny fototry ny tranokala iray dia azontsika tsara kokoa hoe impiry ny isehoana ireo teny manan-danja indrindra miseho ao anaty lahatsoratra. Raha tsy mahatratra ny ambaratonga efa nomanina io isa io dia tokony havaozina ny soratra. Tsy afaka manitsy ny andinin-teny ny olona iray raha tsy manadihady ireo fikarohana ambony. Ny motera fikarohana dia manasongadina ny tranokalan'ny TOP-10 araka ny fepetra sasany ary izany dia tokony hodinihina foana mandritra ny fanoratana. Ny fiasana miaraka amin'ny lahatsoratra amin'ny pejy ary ny fampitahana azy amin'ny votoatin'ny mpifaninana dia ahafahanao manamarina ny maha-misy ny pejy iray ary manome ny famakafakana SEO momba ireo fanontaniana lehibe. Izany rehetra izany dia mamela ny manampahaizana manokana momba antsika hahazo vaovao momba ny fomba hanatsarana ny toerana misy ny tranokala ao anatin'ny valin'ny fikarohana Google ary hampitombo ny fahitana.
Famakafakana fifamoivoizana tranokala
Ny famakafakana fifamoivoizana tranonkala dia ahafahanao mahita ny fizarana ny fifamoivoizana tranonkala, ary koa ny loharanom-pifamoivoizana. Mandritra io dingana io, ny fizotran'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalan'ny mpifaninana mba hahitana tsara kokoa ny tsena. Amin'ity karazana fanandramana ity dia ampiasaina ny serivisy manokana. Io dia ahafahantsika manala ireo vaovao manaraka:
isan'ny mpitsidika tsy manam-paharoa;
isan'ny fijerin'ny pejy isaky ny fivoriana;
loharanom-pifamoivoizana (mivantana, referral, organika, karama ary sosialy).
Ny fandalinana ny fifamoivoizana mankany amin'ilay tranokala dia fomba iray handinihana ny sain'ny mpifaninana.
Famakafakana SEO ireo mpifaninana
Na dia asa goavana aza ny fanaovana famakafakana SEO amin'ny tranokalan'ny mpifaninana dia mamela anao hijery jery ilay seho amin'ny fifaninanana hahitana:
fomba hahomby amin'ny votoatiny;
impiry ary impiry ny tranokala mampifandray amin'ireo mpifaninana;
ny fananan'ny mpifaninana izay tsy ao amin'ny tranokalan'ny Internet;
lesoka avy amin'ny mpifaninana;
lesoka amin'ny tranokalan'ireo mpifaninana.
Ny fampitahana ny tranokalanao amin'ireo mpifaninana dia ahafahanao mahatakatra ny fomba hanatsarana ny laharan'ny tranokalanao. Ny manam-pahaizana momba ny Semalt dia handinika sy hanara-maso ireo tranokalan'ny mpifaninana aminao mba hianatra bebe kokoa momba ny tsenanao manokana ary manantona izany fampahalalana izany hanatsarana ny valim-pikarohanao.
Ny famakafakana teknika tranonkala
Ny famakafakana teknika tranonkala iray dia ao anatin'ny sokajy lalina amin'ny famakafakana SEO. Ny fanaraha-maso ara-teknika dia mitaky fanandramana betsaka amin'ny sehatry ny fampiroboroboana tranonkala, izay azon'ireo matihanina Semalt. Ny lafiny sarotra indrindra amin'ny famakafaka ara-teknika dia ny fandikana ny data. Ny fanadihadianay teknika dia mirakitra ireto faritra manaraka ireto:
Ny fandalinana ny indexing site dia mampiseho ny isan'ireo pejy tafiditra ao amin'ny fikarohana Google. Raha nahita ny pejinao 50 in-droa ny pejin'ny fikarohana, ary manana pejy 300 ny mpifaninana, ny tranonkalanao dia tsy hanana toerana ambony ao amin'ny valin'ny fikarohana organik ho an'ny teny fanalahidy avo lenta.
Ny fandalinana ny fahazoana toerana dia maneho ireo teny fanalahidy rehetra izay ilain'ny tranokala eo amin'ny motera fikarohana. Fitaovana mahery io hametahana haingana ny teny fanalahidy vaovao hampiroboroboana sy hahitana ireo pejy malaza amin'ny mpifaninana.
Ny fanadihadian'ny teny fanalahidy amin'ny tranokala dia misy ny fanangonana angon-drakitra mifandraika amin'ny tranokalan'ny mpifaninana iray, aorian'izay ny famotopotorana ireo fanalahidy fototra dia nodinihina tamim-pitandremana, nodinihina tamin'ny semantikika, nipoitra ary nampiharina.
Ny famakafakana ny fahazoan-dàlana amin'ny tranokala dia mandrefy ny hafainganam-pandehan'ny tranokala, aorian'izay dia ampitahaina amin'ny tranokala amin'ny fampisehoana TOP. Ity dingana ity dia ahafahanao mahita pejy miharihary amin'ny tranokalanao.
Ny fanadihadihana rohy momba ny tranonkala dia manamarina ireo rohy anaty anaty ao anaty pejy amin'ny tranokala. Ny karoka fikarohana iray dia afaka mahita ny pejin-tranonkala iray hafa raha toa ka manana loharanom-pahalalana mitovy na tranokala misy azy ny pejy hafa. Amin'ny tranga sasany, ampy hampifandraisana ilay tranokala amin'ny fikarohana karoka TOP.
Ilaina ny famakafakana ny pejy amin'ny tranokala iray raha tanterahana amin'ny fangatahana avo lenta ny fampiroboroboana. Ny antony faharoa fanaraha-maso amin'ny antsipiriany ny pejy lehibe dia ny mahatakatra bebe kokoa ny fomba aninjarana ny lanjan'ny pejy eo amin'ireo mpifaninana aminao. Ny antony fahatelo dia ny fitadiavana marimaritra iraisana amin'ireo valiny ambony sy ny pejiny fototra ary ny fampiharana ny paikadiny amin'ny fivarotanao an-tserasera.
Ilaina ny fitomboana ny fampitahana ireo takelaka meta avy amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao. Izany dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fampiasana mpiady ary manome alàlana, ankoatra ny zavatra hafa, hamantatra ireo lesoka ao amin'ny tranokalanao, votoaty tsy mitanila, redirika diso, ary rohy tapaka. Raha manadihady fametahana taratasim-pamantarana amin'ny tarika misy lasibatra ary voafaritra tsara kokoa ny fangatahana fanalahidy matetika.
Fakafakao ny rohy ivelany mankany amin'ilay tranokala
Rehefa manadihady rohy ivelany ho any tranonkala ianao dia mahazo ny lisitry ny tranonkala rehetra s sy pejy nampifandray ny tranokalanao ary koa vatofantsika mandritra ny fotoana voafetra. Ity famakafakana ity dia aseho ho endrika iray amin'ny tatitra momba ny latabatra sy ny tabilao ny fitomboan'ny faobe. Ny rohy sy backlink ivelany dia lohahevitra "somary volombava" amin'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo SEOs. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fiheverana fa tsy misy fifampitohy misy fanampiana raha toa ka tsy misy firafitra fototra semantik ary tsy manaraka ny fitsipika SEO fototra.
Fakafakao ny firafitry semantikan'ny tranokala
Ity dia ireto manaraka ireto:
fananganana fotodrafitrasa semantik;
fanakonana ireo fanontaniana;
fampitahana ny valiny sy ny firafitra ankehitriny.
Amin'ny alalàn'ny famakafakana ny rafitry ny tranokala iray dia hamerenanao tsara ny pejy rehetra. Ny firafitra semantaly dia ny filahatr'ireo publication kataloges izay mahomby ho an'ny mpampiasa sy ny milina fikarohana. Ankehitriny, apetraka amin'ny firafitra semantaly amin'ny tranokala iray ny teny fanalahidy. Manatanteraka ny famakafakana ny rafitry ny semantisaly amin'ny tranokala amin'ny fomba mendrika, ny famakafakana ny firafitry ny tranokala, ny famakafakana ny siansa semantik, ary ny famakafakana ny semantika amin'ny ankapobeny.